Anyị ga-ekerịta ụfọdụ ihe ngosi ahụ Oli nyere na ọkwa dị n'ihu, mana achọrọ m ịkekọrịta otu n'ime ngwaọrụ ndị ọ mere ka anyị mara maka na ọ hụrụ n'anya n'ezie Ihe eji eme ihe. UsabilityHub na-enye gị ohere ịkekọrịta akara ngosi ọhụụ kachasị ọhụrụ iji hụ mmetụta ya, kesaa ụdị dị iche iche nke ibe iji hụ nke kachasị amasị, ma ọ bụ nweta nzaghachi ebe ndị ọrụ nwere ike ịnyagharịa na saịtị gị iji chọta ihe.
Nnwale Nav Flow - Nnwale mmiri Nav na-ekpebi ma ndị nnwale nwere ike ịgafe na imewe gị. Upload bulite usoro nke usoro peeji, ma dee ebe onye nyocha ga-pịa ka ịga n'ihu. A na-edepụta ihe ịga nke ọma na ọdịda nke ndị na-eme ihe ọ bụla.